आज शताब्दीकै लामो खग्रास चन्द्र ग्रहण: कुन राशीलाई कस्तो ? | Alagdhar
घरBanner Newsआज शताब्दीकै लामो खग्रास चन्द्र ग्रहण: कुन राशीलाई कस्तो ?
आज शताब्दीकै लामो खग्रास चन्द्र ग्रहण: कुन राशीलाई कस्तो ?
काठमाडौँ – नेपालसहित विश्वका अधिकांश क्षेत्रमा शुक्रबार गख्रास चन्द्र ग्रहण लाग्दैछ । आषढ शुब्ल पूर्णिमाको दिन अर्थात गुरु पूर्णिमा शुक्रबार यो शताब्दीकै लामो खग्रास चन्द्र ग्रहण लाग्दैछ ।
अघिल्लो लेखमाआज गुरु पूर्णिमा, गुरूप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गरी मनाइँदै
अर्को लेखमा आजको विनिमय दर